HTC BlinkFeed™ - စကရင်အတွင်းမှ သင့်ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာ | HTC Blinkfeed | HTC One (M8) | HTC Myanmarနာမည်စာရင်းသွင်းပါနောက်ဆုံးပေါ်ကို ရယူပါကမ်းလှမ်းမှုများ၊ အချက်အလက်နှင့် အရာအားလုံးကို HTC တွင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ကိုယ်ပိုင် HTC ပိုင်ဆိုင်ထားပြီလား?subscriptcheckerအထူး HTC နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကမ်းလှမ်းချက်များ ရွေးချယ်ရန်၊ ထုတ် ကုန်သတင်းအချက်အလက်နှင့် သတင်းအတိုအထွာများ အတွက် ကျွန်ုပ်ထံ အီမေးလ်ပေးပို့ပါ။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုပြန်လည် ကြည့်ရှူပေးပါရန် ကျေးဇူးပြုပြီး ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သင်တို့ရဲ့သတင်းကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် သင့်အားမကြာမှီ HTC ရဲ့သတင်းသစ်များကိုပေးပို့ ပါမည်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ__ စမတ်ဖုန်းများ
ထောက်ပံ့ပေးသည်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများစမတ်ဖုန်းများ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ ဆော့ဖ်ဝဲ + APPSအသုံးချ ပရိုဂရမ်များဖုန်း အင်္ဂါရပ်များကင်မရာပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးသည်သင့်ရဲ့ ဝဘ်ဘရောက်စာ သည် သက်တမ်းလွန်နေပြီဖြစ်သည် :(ကျွန်ုပ်တို့သည် ထူးဆန်းသော အတွေ့အကြုံများကို တည်ဆောက်ပြီးသွားပြီ၊ သို့သော် ကံမကောင်းစွာဖြင့် သင့်ရဲ့ ဘရောက်စာ သည် ၄င်းကို မထောက်ပံ့ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ အဆင့်မြှင့်တင်နေသည်လို့ တွေးတောပါ၊ ပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ဆီကို နောက်တစ်ကြိမ် အလည်လာခဲ့ပါ။ထို့အပြင် ၄င်းအရာအားလုံးသည် အခမဲ့ ဖြစ်သည်!HTC One (M8)ပုံစံကင်မရာHTC BOOMSOUND™HTC BlinkFeedအသုံးချ ပရိုဂရမ်များယခုပင် ဝယ်ယူလိုက်ပါပုံစံကင်မရာHTC BOOMSOUND™HTC BlinkFeedအသုံးချ ပရိုဂရမ်များယခုပင် ဝယ်ယူလိုက်ပါအသုံးပြုကြည့်လိုက်ပါစိတ်တိုင်းကျအချက်အလက်များအွန်လိုင်းအချက်အလက်များပိုမိုလေ့လာပါ။Screen တစ်ခုအတွင်းပေါ်မှ သင့်ကမ္ဘာလှုမှုရေး ပို့ စ်များ၊ လျှပ်တစ်ပြက်သတင်းများ၊ အားကစား ရမှတ်များ စသည့် - သင်နှစ်သက်သည့် အရာအားလုံး၏ အက်ဒိတ်များကို ချက်ချင်းရယူနိုင်ပါသည်up-to-date သတင်းများကို ချက်ချင်းရယူပါ လှုမှုရေး ပို့ စ်များ၊ လျှပ်တစ်ပြက်သတင်းများ၊ အားကစား ရမှတ်များ စသည့် - သင်နှစ်သက်သည့် အရာအားလုံး၏ အက်ဒိတ်များကို တစ်နေရာတည်းတွင် ချက်ချင်းရယူနိုင်ပါသည်။ ဘ၀သည် အမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေသည်။ HTC BlinkFeed သည်လည်းပြောင်းလဲပေးသည်။ကျွန်ုပ်တို့ ၏ဥာဏ်စမ်းပဟေဋ္ဌိဖြေကာ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ဖန်တီးပါ။စတင်ပါ[HTC BlinkFeed™ သို့ ကျော်လိုက်ပါ]မေးခွန်း (၁)သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်မှာပါ ဘာပါလိမ့်။?အဆုံးစွန်ကမ္ဘာ တောင့်တမှုကန့် သတ်မဲ့ ရှူးဖိနပ် ပံ့ပိုးမှုတစ်သက်ထာဝရ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုပိုမိုသော စိတ်ဆန္ဒများမေးခွန်း ၂ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် သင့်စိတ်ကူးအိမ်မက်က ဘာများလဲ။?ကန့် သတ်မဲ့ ကစားစရာအရုပ်ကလေးများစန္ဒာလမင်းဆီ ပျံသန်းသွားပါတော့အားကစား အကျော်အမော်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါမကုန်နိုင်သော ရေခဲမုန့် မေးခွန်း ၃ဘာတန်ခိုးစွမ်းအားရှင်ဖြစ်ချင်ပါသလဲ။?လေကြောင်းခရီးတယ်လီဖုန်းဖြင့် ပို့ ဆောင်ပေးခြင်းပုံစံပြောင်းပါတုနှိုင်းမှုမေးခွန်း ၁ကျွန်းတစ်ခုပေါ်သောင်တင်ခဲ့ပြီ၊ အရင်ဆုံးသင်ရှာဖွေရမည်မှာလတ်ဆတ်သော အုန်းသီးနေရောင်ခြည်ကြောင့် အသားရောင်ညိုစေသော လိမ်းဆေးအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုဘောလီဘောပိုက်ကွန်မေးခွန်း ၂သင်၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်း ပြီးပြည့်စုံသော စနေညအပါအ၀င်စားကောင်း သောက်ဖွယ် ပီဇာမုန့် အရေးပါသော ဂိမ်းသူငယ်ချင်းများ နှင့် စင်တင် တေးဂီတဗွီဒီယိုဂိမ်းများမေးခွန်း ၃သင် ဘာအကြောက်ဆုံးလဲ။?ဆံပင်ပုံပန်းမကျသော နေ့ တစ်နေ့ ဖုန်း မှ မီဒီယာမှ အကြောင်းအရပ်တစ်ခုဆက်ဆံသုံးပြုမှု မပါလျင်မြန်စွာပြင်ဆင်ထားသော အစာအိမ်တွင် အုံ့ ပုန်း၊ နေသည်မေးခွန်း ၁အိပ်ယာမှ စနိုးချိန် ဘာလုပ်သလဲ။?နံနက်စာ စားပါအ၀တ်အစား ရွေးဝတ်ပါစမတ်ဖုန်း စစ်ဆေးပါတစ်ရေးတစ်မှေးအိပ်စက် ခလုတ် နှိပ်ပါမေးခွန်း ၂ကောင်းမွန်သော ခရီး! ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ။?ကြိုတင်ခန့် မှန်းချက် စစ်ဆေးပါဘက်ထရီများ အားသွင်းပါကြိုတင်လုပ်ဆောင် ဇယားစာရင်းထုတ်ပိုးအစာပြေများမေးခွန်း ၃သင် ထီပေါက်ပြီ! နောက်ထပ်ဘာလဲ။?ကမ္ဘာပတ် ခရီးသွားပါမက်ဒေါနား နှင့်အတူ လှည့်လည်ခရီးသွားပါကမ္ဘာ့ အောင်နိုင်သူများပြိုင်ပွဲသုံးဖြုန်း ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းပို့မည်မျဉ်းကြောင်းဆွဲပါ။FacebookTwitterInstagramGoogle+မျဉ်းကြောင်းဆွဲပါ။သင့်သူငယ်ချင်းတွေ ဘာဖြစ်နေကြတယ် ဆိုတာ ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။သင်၏ အနှစ်သက်ဆုံးသော ပါဝင်သည့်အရာနှင့်အတူ Facebook ရဲ့နောက်ဆုံးရ ခေတ်မီမှုများကို ရယူပါ။ HTC BlinkFeed နဲ့ ဆိုရင် - အားလုံးက ဒီမှာဘဲ။အခိုက်အတန့် လေားများ ဘယ်တော့မှ မလွှဲစေနဲ့ ။HTC BlinkFeed မှ တိုက်ရိုက် - ထင်မြင်ချက်၊ ကြိုက်နှစ်သက်မှု နဲ့Instagram ပါဝင်မှုမှာ ပြန်တင်ထားလိုက်မယ်။နယ်ပယ်ကွင်းဆက်အတွင်း ဆက်နေပါ။HTC BlinkFeed သည် လျင်မြန်ပြီး၊ သင်၏ Google+ လုပ်ဆောင်မှုဆောင် တာ အားလုံးနှင့် အမီလိုက်ရန် လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။တေးသီစာသားများ၏ ထိပ်ဆုံးတွင်ဆက်လက်ရပ်တည်နေသည်။HTC BlinkFeed နှင့် သင့်နောက်လိုက်များသည် လက်လွှဲရိုက်ချက် မှုတစ်ချက်သာဖြစ်သည်။ တေးသီစာသားများ လေ့လာပြီး သိထားသူဖြစ်နေပါ။သင့်စိတ်ကြိုက် HTC BlinkFeed™ သည် နှင့် ထိတွေ့ ပါ။သင့်စိတ်ကြိုက် အွန်လိုင်းပါဝင်မှု သည် လက်လွှဲရိုက်ချက်တစ်ချက်သာ ဖြစ်သည်။သင့်ကမ္ဘာထဲက လျှပ်တပြက်။စူးစမ်းလေ့လာရန် အပေါ်၊ အောက် လက်လွှဲရိုက်ချက်လုပ်ပါ။အသွင်တူသဘောပြုကျင့်ခြင်း သရုပ်ပြခြင်းအတွက်သာအသွင်တူသဘောပြုကျင့်ခြင်းHTC BlinkFeed™ စူးစမ်းလေ့လာရန် ကလစ်၊ ဆွဲပါ။အသွင်တူသဘောပြုကျင့်ခြင်း သရုပ်ပြခြင်းအတွက်သာအသွင်တူသဘောပြုကျင့်ခြင်းကွက်တိဒက်တိပဲ- မြို့ တွင်းရှိ ၀တ်လုံတိုဝတ်ဆင်တော်လှန်သူအသစ်ရှိတယ်၊ စူပါလူစွမ်း ကောင်းကို ရွေ့ လွှတ်လိုက်။ အားလုံးကျွမ်းကျင်ပြီးသားပါ!နောက်ဆုံး ခံတပ်! HTC BlinkFeed ခေါ်ဆောင်ရာသာ သတ္တိရှိရှိ လိုက်သွားပါ!အမလေး၊ HTC BlinkFeed ရဲ့ လျော့ပေါ့သဘောတူညီချက်ပုံစံတစ်ခုထဲမှာ ပိတ်လှောင်ခံရပြီ။ အများရှေ့ မှာ ဆေးတစ်ခွက်လို ငါယစ်မူးပြီး၊ မစွဲလမ်းသင့်ဘူးလို့ မှန်းဆ ထား...Foursquare မှာရှိတဲ့ Fountain of Youth ထဲကို တစ်ယောက်ယောက် ၀က်လာပြီလား?! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ HTC BlinkFeed!လာမကြည့်နဲ့ ၊ ငါအကျည်းတန် အရုပ်ဆိုးတယ်! #အရာအားလုံးမှားယွင်းနေသော နေ့အင်တာနက်မရှိတာလား? ဘယ်မှာ ကြောင်လေးတွေ မြင်ရလိမ့်မလဲ? လူတွေ ဘာစားသောက်နေကြတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?!?!အမလေး ဘုရား၊ ကမ္ဘာတစ်ခွင်လုံး လျင်မြန်စွာပြင်ဆင်ထားတဲ့ အစာဘဲ စားစရာရှိတဲ့နေရာမှာ ငါရောက်နေပါလား။#စိတ်မွန်းကြပ်နေခြင်း နဲ့ငါ့ကို ကူညီပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုက HTC BlinkFeed မှာဘဲရှိတယ်။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လား? စစ်ဆေးပါ! HTC One လား? စစ်ဆေးပါ! စွန့် စားမှု ရသ၊ လား? နှစ်ခါ စစ်ဆေးပါ။အမလေး ဘုရား၊ မက်ဒေါနား နဲ့ ဂီတနယ်လှည့်ခရီးသွားဖို့ အိတ်တွေ ထုပ်ပိုးနေတာ။ကျွန်ုပ်တို့ ။ ဖြစ်သည်။ ဤ။ ဗိုလ်စွဲသူများ။ဈေးဝယ်ဖို့ ခက်ခဲလွန်းလို့ငါ့အကြွေးဝယ်ကဒ် တည်ငြိမ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။၁၀,၀၀၀ ကျော်မကတဲ့ ဆောင်းပါးအသစ်တွေ ငါ့ရဲ့ မူလစကရင်မှာ နေ့ စဉ် ပို့ ခြင်းခံရတယ်။ မင်္ဂလာပါ လို့ HTC BlinkFeed ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်!မျှဝေသည် - HTC BLINKFEED™ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
အွန်လိုင်းပေါ်မှ သတင်းများကို စက္ကန့် ပိုင်းအတွင်း စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်နိုင်ပြီး ခဏအတွင်း နောက်ဆုံးထွက်သတင်းများကို ရယူနိုင်ပါပြီ။ Facebook post များ၊ Twitter feed များ၊ နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ အားကစားရလဒ်များစသည်တို့ ကို homescreen အပေါ်တွင် တစ်ချက်လောက် လက်ဖြင့်ဆွဲလိုက်ပါ။ သတင်းများကို အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ရှာဖွေချင်ပါကလည်း HTC BlinkFeed အပေါ်တွင် ရှာနိုင်ပါသည်။ ရှာဖွေရန် လွန်စွာမှ လွယ်ကူပါသည်
အင်တာနက်၏အကောင်းဆုံးများသည် HTC BLINKFEED™ ပေါ်တွင်ရှိပါသည်။
နေရာတစ်ဝှမ်းတွင် သောင်းနှင့်ချီရှိသော အချက်အလက်ဌာနများ Facebook၊ Twitter၊ ESPN၊ MTV၊ The Huffington Post စသည်ဖြင့်
[ ပါတနာများအားလုံးကို ကြည့်ရှုရန် ]ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးသည် ပိုပြီးကောင်းမွန်လာပါပြီ